တကယ်အလုပ်ရှာချင်တာလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » တကယ်အလုပ်ရှာချင်တာလား
Posted by manawphyulay on Jan 28, 2011 in News |4comments
Source : manawphyu.net
မမနောတော့ … ညမ်းညတ်နဲ.တွေ.တော့ … အန်တီဖြစ်လိုက် …
နာဇီပါတီနဲ.တွေ.တော့ … အစ်ကိုဖြစ်လိုက်နဲ. … ဟီးးး
ကွီးရေ ပြောမှ ပြောတတ်ပါ့ပေတယ် ။ ဟားဟား ။
ဟုတ်ပါ့ ကွီးရေ မလာဖြစ်လို့ ခုတော့ အန်တီခေါ်ခံရ၊ အကိုခေါ်ခံရနဲ့ တော်သေးတယ် ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာတော့ လာရေးသွားတာတစ်ယောက်က ဒီလိုလေ ဘုန်းဘုန်းရေ နောက်တစ်ခါလည်း ဒီလိုပိုစ့်လေးတွေ တင်ပေးပါဦးဘုရားတဲ့လေ
အင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးရတော့မလို ဖြစ်နေပြီ ဒါတောင် မနော အကြောင်းတင်ပေးထားတာကိုနော်………….. အတိုမဟုတ်ဘူး နာဇီရေ အရှည်ကွဲ့ အရှည် အာ ရှုပ်ကုန်ပြီ သိတော့ဘူး ခေါ်ချင်သလိုသာ ခေါ်ကြတော့…. ဆိုးပ